स्वस्थ सन्तान जन्माउन के गर्नुपर्छ ? भाग – १ – Manokranti Centre
April 8, 2019by Manokranti2
यो कथा हामीले कैयाँै पटक सुनेका छौँ । तर, यसको विषयमा हामीले गहिरोसँग सोच्ने गरेका छैनौँ । सम्भोगका समयमा विभिन्न रसायन क्रियाशील हुन्छन् । वीर्य आफैँ पनि विभिन्न रसायनहरूको जोड हो । अम्बिका र अम्बालिकामा डरका कारण सम्भोग समयमा सक्रिय हुनुपर्ने आनन्द, सन्तुष्टि र खुशीका रसायन ‘रिलिज’ भएनन् । बरु त्रास, भय र कष्टसँग सम्बन्धित रसायनहरू सक्रिय भए । जसको असर बच्चामा प¥यो । तसर्थ बच्चा कस्तो हुन्छ भन्ने निर्धारण सम्भोगमा बाबुआमाको कस्तो मुड छ भन्ने कुरामा धेरै निर्भर हुन्छ । हामी गर्भावस्था, बच्चाको जन्म र बच्चाको बाल्यकालको विषयमा चनाखो हुन्छौँ । तर, गर्भाधानको विषयमा खासै चर्चा गर्दैनौँ । यदि सक्षम, सबल र क्षमतावान् सन्तान निर्माण गर्ने हो भने गर्भाधानकै समयबाट ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ ।
हामीलाई हाम्रा आमाबुबाले साइबर स्पेसबाट ‘डाउनलोड’ गरेका हुन् । यसरी हेर्दा सेक्स भनेको डाउनलोडिङ प्रक्रिया हो । यही डाउनलोडका कारण हामीहरू संसारको ‘स्क्रिन’मा आउँछौँ । एक दिन हामी मर्छौं । हाम्रो शरीर नष्ट हुन्छ । तर, ‘कन्ससनेस’ (चेतना) फेरि साइबर स्पेसमा ‘अपलोड’ हुन्छ । संसारमा आएपछि कसैको चेतना परिमार्जित वा व्यापक हुन सक्छ त कसैको पतन वा निकृष्ट हुन सक्छ । पतन वा परिमार्जन जे भएको छ, सोहीअनुरूप नै कन्ससनेस साइबरमा अपलोड हुन्छ । त्यो अपलोड भएको कन्ससनेसलाई फेरि अर्काे महिला–पुरुष जोडीले सम्भोगमार्फत डाउनलोड गर्छ र फेरि नयाँ सृष्टिको सुरुवात हुन्छ । यो प्रक्रियालाई हामीले राम्रो गरी बुझ्न आवश्यक छ । साइबरमा असंख्य कन्ससनेसहरू छन् । कुनै समृद्ध छन् त कुनै निकृष्ट छन् । सम्भोगको अवस्थामा आमाबाबुको मुड जस्तो बन्छ, त्यस्तै चेतना (आत्मा) गर्भमा आएर बस्छ । यदि आमाबाबुको खुशीको मुड छ भने खुशीको चेतना डाउनलोड हुन्छ, यदि डराएको मुड छ भने डराएर बसिरहेको चेतना डाउनलोड हुन्छ । हामीले यो प्रक्रियालाई बुझ्न नसक्दा हामीहरू धृतराष्ट्रजस्ता मूर्ख र पाण्डुजस्ता कमजोर सन्तान जन्माउन अभिशप्त छौँ । यदि समृद्ध मानव सभ्यता निर्माण गर्ने हो भने परिवार र स्कुल सुधारेर मात्र पुग्दैन ।
Nice good point
पुर्व सांसद गायत्री शाहले शारीरिक विकास कम भएको ‘डाउन सिन्ड्रोम’ बच्चा जन्मिएको भन्दै डाक्टरलाई दोष देखाउँदै लिन नमानेर आफ्नो बच्चा मेडिसिटी अस्पतालमै छाडेर हिंडिन्। उनकाे कस्ताे समस्या भएर यस्ताे भएकाे हाेला ?
nextस्वस्थ सन्तान जन्माउन के गर्नु पर्दछ ? भाग - २